Ny valintenin'i Aostralia momba ny COVID-19 dia mendrika hoderaina manerantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafampana Aostralianina » Ny valintenin'i Aostralia momba ny COVID-19 dia mendrika hoderaina manerantany
Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny valintenin'i Aostralia momba ny COVID-19 - ENCORE
Ny valintenin'i Aostralia momba ny COVID-19 dia nialona ny firenena maro. Vao haingana i Dr. Fauci no nidera ny firenena noho izy mpitondra an'izao tontolo izao amin'ny "fifehezana sy fitantanana ireo karazany miovaova."
Hatramin'ny 23 martsa, ny tranga COVID-5 vao 19 no nisy an'i Aostralia, avy amin'ireo olom-pirenena niverina avy any ivelany.
Rehefa nanjary fandrahonana ho an'i Aostralia ny COVID-19 voalohany, dia namaly haingana ny governemanta federaly tamin'ny fanidiana ny sisintany iraisampirenena sy ny fampiharana fandaharana fitokanana an-trano tsy maintsy atao.
Ny Sydney Opera House dia afaka nanolotra ny opera italianina "Ernani" nataon'i Giuseppe Verdi nandritra ny areti-mandringana izay mbola manaikitra an'izao tontolo izao.
Amin'ny tranga tsy manam-paharoa amin'ny tontolon'ny famokarana, ny Opera Opera ao Sydney dia nanolotra ny opera Italiana "Ernani" nataon'i Giuseppe Verdi nandritra ny areti-mandringana izay mbola mamely an'izao tontolo izao.
William A. Haseltine, mpahay siansa amerikana fanta-daza amin'ny asa famakiany tany amin'ny tsimokaretina VIH / SIDA, ny génom-olombelona, ​​ary ireo hetsika lehibe hafa, dia nanasongadina ny fahombiazan'ny fandraisana andraikitra noraisin'ny Governemantan'i Aostralia tamin'ny voalohany fipoahan'ny COVID-19 amin'ny iray amin'ireo lahateny nataony momba io lohahevitra io.
Hatramin'ny 23 martsa 2020, i Aostralia dia nahitana tranga 5 vao haingana an'ny COVID-19, niainga tamin'ny olom-pirenena aostraliana niverina avy any ivelany tamin'ny quarantine tao amin'ny hotely nametrahana azy ireo.
Rehefa nanjary fandrahonana lehibe ho an'i Aostralia ny COVID-19 voalohany, dia namaly haingana ny governemanta federaly tamin'ny fanidiana ny sisintany iraisampirenena sy ny fampiharana programa tsy maintsy anokanana an-trano ho an'ireo olom-pirenena Aostraliana niverina. Ny fanjakana sy ny faritany koa dia nanidy vonjimaika ny sisintaniny voalohany hatramin'ny 1919 nandritra ny areti-mandringana Espaniola.